नेपालमा किन स्थिर छ कोरोना संक्रमण दर ?
कम भएको छैन जोखिम
बिहीबार, साउन ७, २०७८ साझावोली संवाददाता
काठमाण्डौं - नेपालमा कोरोना संक्रमण दर स्थिर देखिएको छ । तर जोखिम भने कायमै रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरुले बताएका छन् । स्वास्थ्य अधिकारी र विज्ञहरूले केही सातादेखि नेपालमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण दर र गम्भीर बिरामीको सङ्ख्या स्थिर अवस्थामा रहेको बताए । उनीहरुका अनुसार नेपालमा कोरोनाभाइरसको जोखिम भने कम भएको छैन ।
कुनै पनि बेला फेरि सङ्क्रमणको दर उकालो लाग्नसक्ने जोखिम देखिएको छ । त्यसका लागि भाइरसको भेरिअन्ट र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरिएको वा नगरिएको कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनीहरूको भनाई छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारका तर्फबाट लगाइएका अधिकांश प्रतिबन्धहरू हटाइएकाले पनि जोखिम बढ्नसक्ने चिन्ता छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरणअनुसार अस्पतालका सघन उपचार कक्ष, आईसीयू, र कृत्रिम स्वास्प्रश्वास यन्त्र, भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीको सङ्ख्यामा खासै कमी देखिएको छैन । कैयौँले मन्त्रालयले सङ्कलन र सार्वजनिक गर्ने विवरण यथार्थ नभएको प्रश्नहरुपनि उठेका छन् । विगत एक साताको तथ्याङ्क हेर्दा आईसीयूमा रहेका बिरामीको सङ्ख्या दैनिक पाँच सय ६० देखि ६ सयको बीचमा देखिएको छ ।
उक्त संख्या गत वैशाख जेठमा नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण उच्च विन्दुमा पुगेको अवस्थाको एक तिहाई हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भने केही सातादेखि गम्भीर बिरामीको संख्या स्थिर देखिनुलाई कोरोनाभाइरसको जोखिम कम नभएको रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ७, २०७८, ०८:०२:००